BitBose ndiyo yekutanga global cryptocurrency exchange iyo ine ramangwana rakananga crypto investment idea. Nekunakidza kuchema kwekugadzirisa zvigadziriswa, sarudzo iyi iri kupa mikana yepamhizha yepamhizha uye inoshamisa kune vashandi vayo nevashambadziri nenzira yekutsvaga minda nekutengesa zvigadziriswa, mahofisi ekuchengetedza mahofisi, zvakanyanya kudarika p2p kutengesa, smart cryptocurrency uye zvikwereti zvinogadzirisa zvemari. Nechinangwa chekuita sepamusoro-soro crypto smart bank mune ramangwana, BitBose inobatanidza zvakawanda zvisingakanganisi zvekodzero dzisina kukwana mune zvemari. Nekushandiswa kwekambanikiti ye blockchain, iyi shanduro yekushandura inoderedza kupesana pakati pezvinoitika kusina kukanganiswa kwezvinoitika mumusika. Kubva paunyanzvi hwekudzidzira uye kudzidzira zvemichina pamusangano we blockchain nekushandisa purogiramu yepamberi, BitBose yakagadzirira kugadzira zita rayo mumusika we Cryptocurrency
Chii chinoratidzwa neBitBose?
BitBose ine chinangwa chekuvhiringidza mabhizimusi epanguva ino nekugadzirwa kwemabhizimisi ekugadzirisa matanho ayo akavakirwa pamagetsi e blockchain. Inobatsira vatyairi kuwana mikana yakawanda yekutsvaga muBitBose platform.
Ndezvipi zvinobatsira pakushandisa BitBose?
Nzira dzakanakisisa dzokubhadhara uye kushandiswa kwezvinhu zvakasvibiswa zvekutsvaga: Inoshamisa yekutsvaga mari yeBitBose inobatsira vashandisi kuti vachinjana mhando dzakasiyana-siyana dzekristo uye fiat mari nenzira iri nyore.
Best investment banking solution: BitBose iri kupa zvikwereti zvakasiyana-siyana zvekutsinhanisa mabhizinesi kune vashandisi varo i.e Crypto zvikwereti, mining rewards program uye podfolio yemari.
Iva muridzi webhadha yako: Sezvakawanda zvebhengi system, BitBose haisi kuvhara mari yevashandisi. Pakutengesa kudhura kwekutengeserana, vashandi vanogona kutumira mari yavo ye crypto kune imwe chikwereti kana kuchinjana. Mushure mekuderedzwa kwemitengo yekutengesa, vanogona kuwana mari chaiye mumabhuku avo ebhangi
Inobatanidza fiat uye crypto investment: BitBose inobvumira mutengi kuchengetedza mari ye fiat uye crypto munhoroondo imwechete. Nenzira iri nyore uye yakajeka, mupiro anobvumirwa kuva nehupenyu hwakakwana pamari yake.
Zvikwereti zvishomanana zvekutengesa: Bhositi yeBose iyo inofarira 50% zvishoma kutengesa mari pamusangano.
BitBose iri kupa crypto zvikwereti?
Hungu, BitBose iri kupa chirongwa chekwereti chekristpto chinozobvumira vashandi kuwana mari mune zvaidiwa fiat kana cryptocurrency mushure mokuisa crypto yavo kuBitBose platform. Mupiro anogona kuwana zvakananga mari yacho kubhengi rake rebhangi nekuwana mvumo pakarepo mushure mekuzadza nyore nyore kana kukwereta kushandiswa. Vashandi vanogona kunakidzwa nerusununguko rwemari nokuti BitBose iri kupa mari inowanikwa mubhadharo pasina mari yekuripira. Saka, mushumiri anogona kubvisa pfuma iyo nguva chero ipi zvayo asingatombogadziriswi nedzimba guru.
Ndezvipi zvinokonzerwa neBitBose?
BitBose inosanganisira zvitatu zvikuru: BitBose exchange, BitBose bank uye BitBose smart portfolio.
Dambudziko mumabhanji aripo zvino:
Mumagariro emabhengi, kuongororwa kwomunhu anenge akwidza chikwereti uye zvigadziriswa zvechiyero ichi chinoitwa neHurumende yekwereta. Iyi nzira inotora nguva yakawanda uye izere nezvikanganiso zvevanhu. Bhanga reBisose rinofukidza zvose izvi zvinokanganisa.
BitBose bank is the first crypto bank that distributes the loans to the candidates eligible. Iwe pachako uchangova nhengo yeBitBose bank, apo iwe uchatenga chiratidzo cheBitBose. MuBitBose, AI inoshanda semukuru wechikwereti uyo anoramba achidzidza kubva pamushandisi yekudzidza. Kufanirwa kwemunhu anenge achida chikwereti kunosimbiswa neAI. Pachikonzero chekukodzerwa kwake, anowana kuvimbika kwepamusoro uye huwandu hwehuwandu hwaanokwanisa kushandisa sehomwe. Vaya vanoisa mari vanowana rubatsiro rwekubhadhara iyo mazinga anozivikanwa mushure menguva yakati.
Dambudziko muKutengeserana uye kutengesa:
Iyo hutungamiri hwehurumende uye hukama hwemagariro ehumwe hutsika yemusika unoda rusununguko uye kushandiswa kusingabatsiri. Kazhinji bhizimusi guru rakabudisa uye rakatsigira mari ye fiat, saka inoshandiswa nehurumende yehurumende uye yekutengeserana kwenyika iri pakati penyika dzakasiyana. Mari inotorwa sechinhu chakanaka asi mutengo wemari ye fiat inoramba ichichinja iyo inogona kukanganisa bhizinesi. Kusiyana kwenyika dzakasiyana-siyana kunoitika zuva rega roga asi nzvimbo yemusika inonyanya kunetseka nehurumende nevanamabhizimisi. Saka, BitBose kushandiswa ndiyo nzvimbo inopa mhinduro yakanakisisa yedambudziko iri.
Nekushandisa shanduro imwechete, BitBose kushandiswa inopa sendima imwechete kune vanobata Bose kuti vasvike pamatengo emusika emakwikwi akasiyana-siyana pasi pose. Vatengi vanogona kuwana iyo yakasiyana yekutengesa mutengo we cryptocurrency yaidikanwa pane kugoverana kwakasiyana-siyana. Pamugumo wepamberi, iyo inoratidzirwa inoramba ichifanana kune mutengi asi pamucheto wekupedzisira, inosanganiswa nekukwikwidza kwakasiyana. Saka, mutengi anogona kusarudza mutengo wakanakisisa we cryptocurrency kuburikidza nekuwana shanduko dzakasiyana-siyana panguva imwe chete.
Chimwe chezvinhu zvakanakisisa zveBitBose platform “BitBose smart portfolio”. Nokushandisa izvi, vatsigiri vanogona kusarudza chikamu chemari yavo muchimiro cheBose chiratidzo chavanoda kutengesa nekushandiswa kweIA bot. The allocated p
chikamu chemari chichachengetwa muhomwe uye mupiro haagoni kuishandisa kune chero basa ripi neripi kusvikira achichinja mari ye Smart Portfolio kuti isasvike.
Zvinonzi BitBose bot deconstructs, kuongorora nekushandisa zviratidzo zvekutengeserana pamusoro pekucheka kwakasiyana-siyana kwekuvaka mararamiro ekutengeserana uye kutengesa maererano naro. Pasina kubhadhara penny imwe, mubatsiri anogona kutumira mari kune yekambani yake yebhizimisi uye kudzokera kukakani rake guru.
Chii chinonzi Bose Chiratidzo?
Pamusoro pekufambisa mari, mining uye fiat kana cryptocurrency zvikwereti, BitBose inopa Bose chiratidzo kuvashandisi. Inobva pane ERC20 blockchain teknolojia. Pakutanga 300 mamiriyoni eBose zviratidzo zvinowanikwa kunze kwekuti mamiriyoni makumi maviri emamiriyoni chete achagoverwa kutengeswa kwevanhu vose. Nzira dzekubhadhara dzinobvumirwa dziri muETH uye BTC. Vashandi vanogona kutenga kana kutengesa Bhokheni yeBose pane shanduro yemukati kana yekunze chero nguva.
Ndezvipi zvinobatsiro zvekutora chiratidzo cheBose panguva yeCIO phase?
Kana iwe ukawana chiratidzo cheBose pakutanga kweCI phase, iwe uchave wakakodzerwa kune zvimwe zvikwereti zvebhonasi yekikoni. Iyi bhonasi ichave yakaratidzwa pane dashboard yemapeji eCI.
Ichava ne100% chivimbiso chebasa rakagadzirirwa blockchain protocol nokuti chiratidzo cheBose chichakodhwa neBose smart contract. Pashure peCI phase, hapana chiratidzo chichabudiswa.
Vadzidzisi vezvesayenzi vakatsigira kuchengeteka uye hutano hwezvinhu zvose zvinopiwa neBose smart contract.
Zita rechiratidzo: Chiratidzo cheBose
Kutanga kwechiratidzo chekutengeswa: 16th July 2018
Kuguma kwechiratidzo chekutengesera: 30 November 2018
Nhamba yechiratidzo: ERC 20
Zvose zvikwereti: 300,000,000
Chiratidzo chekutengesa: 70%
Kapu yakadzika: Mamiriyoni 5 USD
Dutu rakaoma: 45 Mamiriyoni USD
BitBose ndiyo yekutanga cryptocurrency kushandura iyo inopa mikana yakasiyana kune vashandi vayo kubva kune yakanakisisa yekutsvaga nzira ye fiat kana crypto currency loans. Dambudziko rezvino rehutongerwo hukuru, socialism uye kutengesa kunogadziriswa nezvikamu zvitatu zveBitBose platform. Nokushandisa BitBose platform, mushumiri anogona kuchengetedza mari ye fiat uye crypto muhomwe imwechete uye anogona kuidzosera chero nguva mushure mekubhadhara mari shomanana yokutengesa. Kana iwe uchida mune ramangwana rakananga cryptocurrency shanduko, ipapo BitBose ndeyako. Kuti uwane mamwe tsanangudzo shanyira nzvimbo yavo.
Dzidza zvakawanda nezveBitBose
Website: https: //www.bitbose.com/
Teregiramu: https: //t.me/bitbose
Twitter: https: //twitter.com/Bitbosecoin
Whitepaper: https: //s3.amazonaws.com/bitbose-documents/Update+bitbose+whitepaper-1.pdf